Haweeney nin ka goysey xubinta taranka marqaatina u geysey saldhig Police + Sawiro – SBC
Haweeney nin ka goysey xubinta taranka marqaatina u geysey saldhig Police + Sawiro
Haweenay ayaa nin ka goysay xubinta taranka ka dibna waxay u qaaday saldhig Police si ay uga dhigato marqaati, ninkaasi ka dhan ah.
Monju Begum oo 40 sano jir ah una dhalatey wadanka Bangladesh ayaa ninka ay ka goysey xubinta taranka ku sheegtey in uu isku dayay in uu kufsado isagoo soo jabiyey gurigeeda cooshadaha ka sameysan, isla markaana uu bilaabay in uu isku dayo in uu kufsado.
Monju Begum oo hor fadhida cariishkeeda lagu soo weeraray
Monju ayaa ninkaasi oo lagu magacaabo Mozammel Haq Mazi markii ay ka goysay xubinta waxay ku riday bac iyadoo u qaaday saldhiga Police-ka isla markaana marqaati uga dhigatey isku day kufsiga.
Mozammel Haq Mazi ayaa loo qaaday Isbitaal, halkaasi oo lagu dabiibayo, waxaana uu dafirey in uu isku dayey in uu kufsado haweenaydaasi macdan la’aanta dhigey.
Mazi ayaa ku dooday in haweenaydan oo sadex ilmood dhashay uu afaaro ka wada dhaxeeyey, isagoo tibaaxay in ay sidaasi u sameysay ka dib markii uu diiday in uu la wadaago hasaawe.
Monju Begum, oo degan deegaanka Mirzapur oo 100 mile u jira magaalada Dhaka ee caasimada Bangladesh ayaa sheegtey in ay jiiftey xiligii Mazi uu soo jabiyey cariishkeeda.
Taliye Abul Khaer oo ah ka mid ah saraakiisha Booliiska deegaankaasi ayaa saxaafada u sheegay in haweenaydu ay ninka mindi kaga jirtey xubinta ragganimada ka dib markii uu isku dayey in uu kufsado.
“Ninka macdantiisii oo ay bac ku soo duuduubtey, ayey keentey saldhiga Booliska Jhalakathi si ay uga dhigato marqaati” ayuu yiri Abul Khaer.
Booliisku waxay sheegeen in ninkan oo xaasle afar caruur ah dhaley marka la daaweeyo xabsiga la dhigi doono.
Mr Mazi ayaa isagoo ku sugan Isbitaalka xaalkiisa lagula tacaalayo wuxuu saxaafada u sheegay in haweenaydaasi oo ay daris yihiin ay sheeko wadaag ahaayeen.
“Afaaro ayaa inaga dhaxeeyey, dhawaan ayay ii soo jeedisay in aan is guursano oo aan aniga iyo iyada wada socono, ka dib waan ka diiday, anigoo u sheegay inaan ka tagi karin xaaskyega & caruurteyda, sidaasi ayayna u qaadatey in ay iga aargudato” ayuu yiri Mozammel Haq Mazi oo ay ka muuqatey niyad xumo ka dib markii dhakhaatiirtu ay sheegeen inaanay xubintiisa taranka toli karin oo aanay xal laheyn, maadaama ay saacado badan ka soo wareegtey xiligii laga gooyey iyo xiligii Isbitaalka la keenay.
gabdhaha adduunka says:
hadaanu nahay gabdhaha aduunka kunool waxanu udiraynaa hambalyo Monju Begum ,taas oo dunida score ka jabisay,hablaha intooda kalana waxan kula dardaarmayaa inay isku difaacaan sida Monju oo kale,oo ninkii soo weerara ay waajibkiisa mariyaan sida Monju.
ramla cabdulaahi says:
waan idin salaamay dhamaan hoolwadeenada sbc
waxaan jooga magaalada addis waam kaxumahay falkaa loogaystay ninkaas lkn wuu edebdarnaa isaguna
lkn waan kaxumahay sorry inay halkaa ku dhufato nay ahayne inan nabar kale ku dhufatay ahayd ama naftaba kawada qaado
kkkkkkkkkkkkkk waa dhacdo layaab iyo qosol leh ragooow kuwaana qaata taaaaaaaaaaaas hadii kale saasa idiin danbayn kkkkkkkkkkkk momju thanks thanks